Semalt Unyanzvi: Ndeapi Mazita Mazita Maunoda Iwe Unoda?
Varidzi vebhizimisi vari kutsvaga kutsvaga nzira dzokugara mberi kweimakwikwi uye kuchengetedza mazita avo. Nekutengesa e-e kuwedzera, mabhizimisi anovimba nemishonga iyi ikozvino kupfuura kare. Chimwe chimiroiyo ikozvino yakawanda kupararira pamusika ndeyokuti vashandisi vepawebhu vanozvitenga zvose zvinyorwa zvemasita mazita ezvigadzirwa zvavo.
Asi vangani mazita echirongwa iwe unonyatsoda kujekesa kuonekwa kwako uye kudzivirira marashi yako? Nyanzvi inotungamirira Semalt Digital Services, Max Bell anopa mhinduro nokukurumidza kumubvunzo uyu.
Kuwana mazita emamwe mazita anokwanisa kunoshanda sechinhu chakanaka kana chekuita - how to use your iphone like a gopro. Kubata mamiriyonimazita ekutonga semassetsi anokubvumira kuti udzivirire mazita echirongwa akafanana kubva pakushandiswa kwevadzidzi vako. Muchirevo che SEO chikamu, zvinokubvumirawo kuti uwanezvose zvakakosha mbeu yemashoko. Kunyange zvazvo izvi zvikomborero zvingaita kuti iwe uve nechepamusoro painternet, zvikwereti zvinogona kuwanikwa mukati.
Kubva ma domains ako ose achashandiswa, injini dzinogona kuidzikisa pasikuedza kuparadzanisa saka zvinokonzerwa nemitambudziko yakaoma kusanganisira kusagadzikana kusarudzwa. Muchiitiko ichi, SEO nyanzvi dzinokurudzira kudyidzana kwebhizimisi rosemazita ekutonga uye masangano akabatanidzwa mune imwe webhusaiti yakasimba. Izvi zvinobatanidza simba rezita rega rega roga kuti rigadzire rimwe rine simba rezita rezitaane simba zvakakwana kuti ave nepamusoro pazvose zvinokodzera injini yekutsvaga pasina kukuvadza kushandiswa kwekare. Kubatanidza kunoda kungojekesa pamusoro300 rekudzokorora zvachose kubva kunzvimbo dziri kune nzvimbo yekutanga, basa rinoshandiswa nyore nyore neEOO chaiye nyanzvi kana webhutungamiri.
Zvose zvinonyorwa mazita mazita dzinowanikwa pasi pehutano hwepamusoro nguva nenguvaredirected, vanoendesa nehutsika hwakaderera hunoita kuti pave nechezasi pasi pezvinjini. Kuti utarise neizvi, shandisa Simba kanaGoogle Search Console kuti uongorore uye usaswe kunze kwehutano hwehutano usati wadzorera zvakare. A text file inotevedzwa nemazita ehutano hwehutano huriakaiswa kune injini yekutsvaga kuti abvise dambudziko iri.
Kazhinji kutaura, mamwe mazita mazita ane iwe mari yakawanda yauri kuendainowanikwa nenzira yegore negore inogona kudzorerwa mari. Zita rimwechete zita rinodhura pakati pe $ 10-35 kuti rishande gore negore risina kuisa mari yekuchengetedza.Wedzera ichi nehuwandu hwemasimita zita rako pachako uye iwe uchange uri kutarisa mufananidzo unodhura.
Kudzivirirwa Kwemagetsi Nemadziro Akawanda
SEO nyanzvi dzinotaura kuti kuchengetedzwa kwechigoni kunogona kuwanikwa kunze kwekuda kutengamultiple domain names. Yeuka mupfungwa kuti hutongi hutungamiri hunotevera mitemo yakasimba uye yakajeka. Nemuenzaniso, kana iwe une chiziviso chekutengeserana kune chimwe chinhuzita renzvimbo, iwe unogona kupikisa uye uwane nzvimbo yako kana imwe sangano inonyora rimwe demo rinosanganisira marimi ako. Panezvizhinji zvezita renzvimbo mazita avo vadzidzisi uye nyanzvi kunze uko nezivo paUniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Zvisinei, izvi zvinogona kuitaIzvo zvinogumbura uye nguva inopedza.
Tora nguva yako ne SEO maitiro uye branding. Sezvakakurukurwa pamusoro apa, kuva nevakawandamazita ekutonga anogona kunobatsira munguva pfupi asi inodhura munguva refu. Nzira yakanakisisa yekudzivisa kukanganisa ndeyekutaurirana nevanokwanisa SEO nyanzvi .